Sida loo yareeyo madax xanuunka kacsanaanta - Hagaajinta Caafimaadkaaga - WAA KU SAMEEYAAN JOOJI
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Sida loo yareeyo madax xanuunka kacsanaanta - Hagaajinta caafimaadkaaga
Sida loo yareeyo madax xanuunka kacsanaanta - Hagaajinta caafimaadkaaga
TELES RELAY 29 July 2019
Immisa jeer ayaad ku soo noqotay guriga kadib maalin mashquul ah oo madax xanuun badan? Haddii ay tahay shaqo badan ama culeys maskaxeed, doorashada kaliya ee aan uga tagnay wajiga xanuunka waa inaan sariirta aadno. Waxaad ka heli doontaa maqaalkan 8 dawooyinka dabiiciga ah si loo yareeyo madax xanuunka kacsanaanta.
Waa maxay madax xanuunka kacsigu?
Madax xanuunka kadeedka waxaa badanaa lagu sharaxaa dareenka lahaanshaha xarig adag ee madaxa ku wareegsan. Waxaad dareentaa xanuun joogto ah oo aan garaacayn. Sidoo kale cadaadiska saaran wejiga iyo macbudyada, iyo xiisadda madaxa, garabka iyo garbaha.
Sababaha saxda ah ee cilad-darradaan lama yaqaan. Si kastaba ha noqotee, waa la rumeysan yahay taas stress waxay noqon kartaa kicinta ugu weyn. Marka la barbardhigo xanuunka dhanjafka, madax-xanuunadan badanaa kuma xiriiraan jahwareerka aragga, lalabo ama matagayo.
Madax xanuunka kacsani wuxuu noqon karaa mid sicir-barar ah ama mid daba-dheer.
Madax xanuunka kacsanaanta ee Episodic
Waxay socon kartaa min daqiiqadaha 30 illaa hal toddobaad. Laakiin madax xanuunka kicinta ee kacsan oo badanaa dhaca ayaa noqon kara mid daba dheeraada.
Madax xanuunka kacsanaanta cVERVIEW
LXanuunku wuxuu dhacaa inta lagu jiro 15 maalmood ama xitaa in ka badan bil kasta muddo ah bilo 3 ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad la tashato takhtarkaaga haddii aadan yareyn karin madax xanuunka kadeedka oo aad u adkaysato ama / ama saameyn ku yeelatid nolol maalmeedkaaga. Xusuusnow in madaxanuunku sidoo kale tilmaan u noqon karo dhibaatooyinka kale ee aadka u daran.
Sidoo kale soo celi: Sababaha 4 ee sharxaya madax xanuun marka soo tooso
Sida loo yareeyo madax xanuunka kacsanaanta leh dawooyinka dabiiciga ah ee 5
Waqtigaan la joogo waxaa jira daaweynno dhowr ah oo daawooyinka lagu daweeyo madax xanuunkan. laakiin waxa kale oo jira dawooyin dabiici ah oo yareyn kara cilad-xumadan.
1. Dareemka dhirta dabka
Rhizome ee geedkaan waxaa lagu gartaa sifooyinka anti-bararka iyo guryaha galmada. Faleebo Ginger ayaa yareynaysa madax xanuun kaliya, laakiin Waxay kaloo awood u leedahay inay xakameyso lallabbo haddii ay dhacdo xanuunka dhanjafka.
2. Faleebo leh chamomile
Faleebo loo yaqaan 'chamomile' ayaa sidoo kale yareyn karta madax xanuunka kacsanaanta. Dhirtan ayaa hodan ku ah qaybaha yareyn kara bararka iyo walaacaed. Qaado koob oo ah chamomile inaad isdejiso oo madax xanuunka kiciya uu kaa tagi doono.
Ma taqaanaa iyaga 6 sifooyinka daawooyinka ee chamomile ?
3. Ku dabool mint indhaha
Diyaarso faleebo mint ah oo urursan oo ku dheji iskudhiska indhaha isha ilaa daqiiqadaha 20. Daaweyntani waxay waxtar u leedahay yaraynta madax xanuunka iyo nasasho murqaha indhaha.
4. Ku dabool khal cider
Maaskarootani waxay leedahay sifooyin falanqeyn Dhex dhig compress-ka lagu qooyay geed isbonji leh oo markaasaad arki doontaa saamaynta xanuunka.
Faleebo ama saliida jidhka, la lavender wuxuu awoodaa inuu yareeyo madax xanuunka, cillad galiyo nudaha ugana shaqeeyo nidaamka dareemayaasha. Waxaan kugula talineynaa isticmaalkiisa la mariyo.
Si loo soo gabagabeeyo ...
Hadda waad taqaanaa dawooyinka dabiiciga ee kala duwan si loo naaquso madax xanuunka kacsanaanta. Laakiin ogaada in wixii ka dambeeya daweyntaan, hurdo tayo leh, cunto caafimaad leh iyo tababar yoga ama ka fikir ayaa kaa caawin doona inaad maareyso walaacaaga oo aad ka fogaato khalkhalkan.
6 Daawooyinka Dabiiciga Ah Ee Ka Soo Horjeeda Migraines
Tani waxay umuuqataa inay adagtahay in la rumeeysto, laakiin waa macquul in lagu yareeyo xanuunka dhanjafka ee dawooyinka dabiiciga, taas oo dhameystiri karta daaweynta. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/comment-soulager-cephalee-tension/
Dhiig yaraanta birta: waxaa lagu daaweeyaa 5 qalabka dabiiciga ah - hagaajinta caafimaadkaaga
3 Daawooyinka dabiiciga ah ee Kahortaga Qabatinka Nikotine - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Dhimashada Arafat Dj: Daishikan wuxuu doonayey inuu arko ayeeyadiisa markii ugu dambeysay
U barooranaya qoyska madaxweynaha Laurent Gbagbo: Geerida Zokora Simplice